Mogadishu Journal » 2018 » November » 27
Mjournal :-Waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya maanta ka furmay shir ay leeyihiin mucaaradka iyo xukuumadda, waxaana looga hadlaya arrimaha ku saabsan doorashada 2020-ka ee dalkaasi ka dhici doonto. Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed oo kulanka soo qabanqaabiyay...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa Khadka Telfoonka kula xiriiray Amiirka Qatar, Sheekh Tamim bin Xamad Al Thani, iyagoo isla soo qaaday Arrimo khuseeya Labada Dal. Madaxweynaha iyo Amiirka Qatar ayaa ka wada hadlay...
The top United Nations official in Somalia has “strongly condemned” terrorist attacks in the north-central city of Galkayo and in the Somali capital on Monday, which left a prominent cleric and a number of other civilians dead. Nicholas Haysom, the Special Representative of the...
Mjournal :-Wasiirka Amniga Koofur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed ayaa soo saaray amar ku saabsan doorashada dhowaan lagu wado inay ka dhacdo magaalada Baydhabo, isagoo faray laamaha amniga dardar gelinta iyo xaqiijinta amniga. Wasiirka oo fulinaya amarkii ka soo baxay Wasaaradda...
Mjournal :-Gudiga Golaha Aqalka Sare ee Dhex dhexaadinta Dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadda ayaa Ku dhawaaqay in la dhameeyay Khilaafkii u dhaxeeyay Dowladda Iyo Maamul Goboleedyadda. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo ah Xildhibaan ka Tirsan Aqalka sare ayaa...
Mjournal :-Wararka ka imanaya magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa sheegaya in Maareeyihii Garoonka Diyaaradaha magaalada Jowhar uu xalay ku diley xaaskiisa guri ay ka degenaayeen xaafada Hantiwadaag ee magaalada Jowhar. Dilka haweeneydan oo la sheegay...